ZayYarHlaing: လိုချင်တာတွေ ရရှိနိုင်ဖို့ Search Engines (15)
ကျွန်တော် ရှာဖွေနေကျ Search Engines တွေကို စုစည်းတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ လိုချင်တာကို နံမည်လေး ရိုက်ထည့်ရှာလိုက်ရုံပါဘဲ။ ကဲ အောက်မှာ သွားလိုက်ပါဗျာ။ ကိုယ်တိုင်း လိုချင်တာကို ကိုယ်တိုင် ရှာဖွေနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက www.Google.com မှာလည် ( မိမိလိုချင်တာ + Mediafire (rapidshare ,megaupload ........) စတဲ့အတိုင်းရှာဖွေကလဲ အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
1. ဒီဆိုဒ်ကတော့ megaupload and rapidshare နှစ်ခုလုံးက Search Engines တွေကို ရှာဖွေပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Recent နဲ့ Popular တွေကိုလည် Home page မှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီ မိမိဆိုဒ်ကိုလည် Search Box မှာ Submit လုပ်နိုင်သလို မိမိရဲ့ Link တွေကိုလည် Search Engine’s index မှာ ထည့်နိုင်ပါတယ်။
2. ဒီဆိုဒ်ကတော့ Google Search Engines ပေါ်မှာ အခြေခံပါတယ်။ နောက်ပြီ Sharing and hosting ပေးထားတဲ့ websites အားလုံးမှာ ရှာဖွေပေးနိုင်ပါတယ်။
3. rapidshare, megaupload နှင့် also mininova တွေမှာ Google Search Engines တစ်ခုဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင် Type အားလုံးနီပါး ရှာဖွေပေးနိုင်ပါတယ်။
4. ဒီ Search Engines တစ်ခုကတော့ Files Searing sites တွေမှ ရှာဖွေ ပေးနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Rapidshare, Megaupload, Uploading.com နှင့် အခြား Hosting Sites တွေကို ရှာဖွေနိုင်ပါသေးတယ်။
5. ဖိုင် အမျိုးအစား တော်တော်များများကို ရှာဖွေပေးနိုင်ပါတယ်။
6. Rapidshare.com, megaupload.com, Yousendit.com, Depositfiles.com, Badongo.com စတဲ့ Hosting Link တော်တော်များများကို ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
7. Hosting Services အတော်များများကို ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ ရှာဖွေရတာလည် အရမ်း ရိုရှင်းပါတယ်။
8. ဖိုင် အမျိုးအစား တော်တော်များများကို ရှာဖွေပေးနိုင်ပါတယ်။
9. Search Engines လေးကကို အတော်လှပပါတယ်။ ရှာဖွေရတာလဲ ထိရောက်တဲ့ ပံ့ပိုမှု့ရှိပါတယ်။
10. သူကလဲ ဖိုဒ်ဆိုဒ် အတော်များများကို ရှာဖွေပေးပါတယ်။
0 comments: to “ လိုချင်တာတွေ ရရှိနိုင်ဖို့ Search Engines (15) ”